म जिम्मै लिन्छु, भदौ २६ को निर्णयबाट स्थायी कमिटी यताउता हुन्न : विष्णु रिमाल [अन्तर्वार्ता]
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफ्नो आन्तरिक कलहकै बीचमा स्थायी कमिटी बैठक सञ्चालन गरिरहेको छ । आइतवार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजनीतिक कारण देखाउँदै बैठकमा उपस्थित नभएपछि अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को नेतृत्वमा बनेको समीकरणले बहुमतका आधारमा कुनै निर्णय गर्ला कि भन्ने संशय राजनीतिक वृत्तमा व्याप्त थियो ।
फागुनको १४ गतेसम्म सामन्जस्यताले काम गर्‍यो । प्रधानमन्त्री बिरामी पनि हुनुभयो । दुईपटक अपरेशन गर्नुपर्‍यो दुई महिनामा । त्यसपछिको स्थितिमा फेरि समस्या आयो । सरकारले सुशासन दिएन भनेर उठाइएका विषयहरू त बाहिरी विषय थिए तर अन्तर्यमा सचिवालयका अन्य नेताहरूले हामीले मान पाएनौं भन्ने रह्यो ।
म बरू लचिलो बनेको थिएँ, न्यूनतम ज्याला अन्य श्रमिकसँग बराबर गरौँ भनेको थिएँ । त्योभन्दा माथि क्षमताअनुसार दिउँ भनेको थिएँ । पूर्व सञ्चारमन्त्रीले त अहिलेको श्रमजीवी पत्रकार ऐनअनुसार नै तलब भत्ता अनिवार्य दिनुपर्छ भन्नुभएको थियो । त्यस हिसाबले त सरकारले ठीकै काम गरेको हो नि !
पार्टीभित्रको झगडा भागबण्डामा आधारित झगडा हो भन्ने तपाईंलगायत धेरै नेताहरूको बुझाइ छ । भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटी बैठकले पनि सहमतिकै आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा नियुक्ति गर्ने सहमति भएको थियो । यस्तो सहमति संविधानसँग बाझिन्न र भनेको ? पद बाँड्दै हिँडेको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै 'इथिक्स'माथि प्रश्न उठ्दैन र ?
पछिल्लो स्थायी कमिटीमा दस्तावेजमाथि छलफल नभनिकन 'पार्टीको संकटबारे छलफल' भनेर कार्यसूची राखियो । प्रधानमन्त्रीलाई पनि बैठकमा उपस्थित गराउन प्रचण्ड-नेपाल पक्षले त्यो कदम चालेको हो ?